Vateereri vs Nharaunda: Unoziva Musiyano Here? | Martech Zone
Vateereri vs Nharaunda: Unoziva Musiyano Here?
Mugovera, June 9, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Takaita hurukuro inoshamisa naAllison Aldridge-Saur weChickasaw Nation neChishanu uye ini ndinokukurudzira kuti uzviteerere. Allison anga achishanda pachirongwa chinonakidza sechikamu cheDigital Vision rubatsiro, achinyora akateedzana Zvidzidzo zveNative American zvekuvaka Nharaunda.
Muchikamu chechipiri chezvikamu zvake, Allison anokurukura Vateereri maringe neMharaunda. Izvi zvakandirova seimwe yezvinhu zvakakosha zvezvinhu zvese zvakateedzana. Handina chokwadi chekuti vatengesi vakawandisa vanoziva kuti pane mutsauko wakasiyana pakati pevateereri nenharaunda. Kunyangwe pano paMartech, tinoita rakanakisa basa rekuvaka vateereri vazhinji… asi isu hatina kunyatso gadzira zano rekuvandudza nharaunda.
Allison anokurukura mutsauko uripakati pe kuvaka vateereri vako - kuteerera, kubatanidzwa, zvirimo zvinoenderana, kuvimbika mapoinzi, kukwirisa, kupa hupfumi, kupa-aways uye mameseji kuenderana. Vamwe vanogona kupokana kuti aya ndiwo marongero ekusimudzira nharaunda… asi pane mumwe mubvunzo unozopindura kuti unayo here kana imwe. Nharaunda inoenderera mberi isina iwe, pasina zvemukati, pasina zvinokurudzira, kana pasina kukosha kwese kwaunovaunzira? Kana mhinduro iri HAPANA (izvo zvingangodaro zviri), une vateereri.
Kuvaka nharaunda yako zano rakatosiyana. Zvishandiso zvekuvaka munharaunda zvinosanganisira kutumidza zita reboka, zviitiko uye vanhu vacho, kushandisa zvirimo mukati, kuva nezviratidzo zvako, kugadzira Akagoverana rondedzero, kuve nehurongwa hwekukosha, tsika, kuvaka chibvumirano uye kuunganidza zviwanikwa. Nharaunda dzinorarama kupfuura mutungamiri, chikuva, kana kunyangwe chigadzirwa (funga maTrekkies). Muchokwadi, Allison akataura chimwe chinhu chinoshamisa patinenge tichitaura naye… mumiriri wechiratidzo munharaunda anogona kugara kwenguva yakareba kupfuura timu yekutengesa pachayo!
Izvi hazvireve kuti kungova nevateereri chinhu chakaipa… isu tine vateereri vazhinji vatinotenda kwazvo. Nekudaro, kana iyo blog yakanyangarika mangwana, ndinotya kuti vateereri vangadaro, futi! Kana isu tichitarisira kuvaka chaizvo chimiro chenguva dzose, isu tinoshanda kuti tikudziridze nharaunda.
Muenzaniso wakanaka weizvi kufananidza kumwe kuongorora kwechigadzirwa maringe Chinyorwa chaAngie (mutengi wedu). Chikwata chiri paAngie Chinyorwa hachimanikidzi kuongororwa, kubvumidza kusazivikanwa ongororo ... uye vanoita basa rakatanhamara pakuratidzira mishumo pakati pevemabhizimusi nevatengi kuona kuti mativi ese ari kubatwa zvakanaka. Mhedzisiro yacho inharaunda yakapenga yakazvipira iyo inogovera mazana eakadzama ongororo yemabhizinesi avanosangana nawo.
Pandakazosaina pachezvangu kuitira sevhisi, ndakafunga kuti ndinenge ndakatarisa chimwe chinhu senge Yelp pane bhizinesi rakanyorwa uye paive neakaverengeka gumi nemaviri ongororo nemutsara kana maviri pazasi pavo. Panzvimbo iyoyo, kutsvagirwa kwevanoridza mapombi munzvimbo yangu kwakaratidza mazana evapombi nezviuru zvekuwongorora kwakadzika. Ini ndaive ndichikwanisa kuidzikisa pasi kusvika ku plumber ine chiyero chakakura chekuiswa kweanopisa mvura. Mhedzisiro yacho ndeyekuti ndakawana hita yemvura hombe nemutengo wakakura uye ini ndaisafanirwa kunetseka nezvekuti kana ndaive ndichibviswa. Mukutengeserana kumwe chete, ndakachengetedza mutengo wegore rese wehunhengo.
Kana, nechimwe chikonzero chisingafadzi, Chinyorwa chaAngie chakasarudza kuvhara magonhi acho, handina mubvunzo kuti nharaunda yavakaburitsa ichaenderera mberi nekuita basa risinganzwisisike ravari kuita nemazvo uye nenzira kwayo vachipa mhedzisiro yebhizinesi. Yelp neGoogle vanogona kuva nevateereri vakawanda… asi Chinyorwa chaAngie chiri kuvaka nharaunda. Musiyano mukuru.
Tags: Vateererichivakwa chevateererichickasawChickasaw Rudzivemunharaundachivakwa chenharaundaevanhu vezvenhaumagariro enhau
Webhusaiti Yakavanzika Mitemo
3 Email Kushambadzira Zvishandiso Unofanirwa Kuziva Nezve
Jun 15, 2012 pa 12: 13 PM
Ini chokwadi ndinotarisira kuti ndiri kuvaka nharaunda. Ndiri kuda chimwe chinhu chinomera kunyangwe ndisiri pano futi. Izvi zvinoenda kuratidza kuti ndakaita chimwe chinhu chakakodzera kuenderera.
Sep 10, 2012 na12: 38 PM
Saka ichokwadi - unofanirwa kutora vanhu sevanofarira (kana zvimwe) nharaunda yako sezvauri. Izvi ndizvo chaizvo zvazvinoita kana iwe uchimhanyisa yako wega kambani futi. Kana ndikakwanisa kuve kure nehofisi kwevhiki uye iyo kambani inomhanya zvakanaka ndisipo, ndinoziva kuti ndakaita chimwe chinhu chaizvo.